အင်္ဂလန် University of Portsmouth မှ တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်
အင်္ဂလန်ရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် University of Portsmouth မှ တစ်ဦးချင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီခွဲ အထိ AT&S Co.,Ltd. အဆောင် (၅)၊ အခန်း (၄)၊ MICT Park လှိုင်မြို့နယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပါ။ ပွဲမှာ ပို့(စ်)မောက်တက္ကသိုလ်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူ Ms.Adele Wong က ပို့(စ်)မောက်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီတန်းတွေနဲ့ မဟာဘွဲ့ တန်းတွေကို တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်မယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာတွေကို ဆွေးနွေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေခံပညာအထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူတွေနဲ့ IGCSE သို့မဟုတ် GCE ‘O’ Level အောင်မြင်ထားသူတွေ ဟာ ပို့(စ်)မောက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ပညာရေးလမ်းကြောင်း ဖြစ်တဲ့ International College Portsmouth (ICP) ရဲ့ University Foundation Program မှတစ်ဆင့် အဆိုပါတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သုိ့ တုိုက်ရိုက်တက်ရောက် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတက်ရောက် လိုသူတွေ အနေနဲ့ AT&S ဖုန်း – ၀၉-၇၉၉၅၉၅၉၄၉, ၀၉-၅၁၂၄၇၆၁, ၀၁-၅၂၁၁၂၅,၀၁-၆၅၂၂၈၈, ၀၉ ၅၀၆၂၁၇၁ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အင်ျဂလနျရှိ ထိပျတနျးတက်ကသိုလျ University of Portsmouth မှ တဈဦးခငျြး ဆှေးနှေးပှဲကို ပွုလုပျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
ဆှေးနှေးပှဲကို ဇှနျလ ၃၀ ရကျ၊ နံနကျ ၁၀ နာရီခှဲမှ ၁၁ နာရီခှဲ အထိ AT&S Co.,Ltd. အဆောငျ (၅)၊ အခနျး (၄)၊ MICT Park လှိုငျမွို့နယျမှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာပါ။ ပှဲမှာ ပို့(ဈ)မောကျတက်ကသိုလျရဲ့ တာဝနျရှိသူ Ms.Adele Wong က ပို့(ဈ)မောကျတက်ကသိုလျရဲ့ ဘှဲ့ဒီဂရီတနျးတှနေဲ့ မဟာဘှဲ့ တနျးတှကေို တိုကျရိုကျလြှောကျထားနိုငျမယျ့ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ဆိုငျရာတှကေို ဆှေးနှေးပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အခွခေံပညာအထကျတနျး အောငျမွငျပွီးသူတှနေဲ့ IGCSE သို့မဟုတျ GCE ‘O’ Level အောငျမွငျထားသူတှေ ဟာ ပို့(ဈ)မောကျတက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ ပညာရေးလမျးကွောငျး ဖွဈတဲ့ International College Portsmouth (ICP) ရဲ့ University Foundation Program မှတဈဆငျ့ အဆိုပါတက်ကသိုလျ ပထမနှဈသို့ တုိုကျရိုကျတကျရောကျ နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပှဲတကျရောကျ လိုသူတှေ အနနေဲ့ AT&S ဖုနျး – ၀၉-၇၉၉၅၉၅၉၄၉, ၀၉-၅၁၂၄၇၆၁, ၀၁-၅၂၁၁၂၅,၀၁-၆၅၂၂၈၈, ၀၉ ၅၀၆၂၁၇၁ ကို ဆကျသှယျစုံစမျးနိုငျပါတယျ။